कुल १३ किलोमिटर दुरीमा चल्ने नेपालकै पहिलो ट्रलिबस सेवा आर्थिक, राजनीतिक र अन्य खिचातानीका कारण सन् २००१ देखी २००३ सम्म २ वर्षका लागि स्थगित गरियो, पछि पुनः २००३ बाट सेवा सुरू गरेको ट्रलिबसले यसपटक भने पुरै यात्रा पुरा गर्न पाएन, यात्रा त्रिपुरेश्वर देखी कोटेश्वरसम्म सीमित गरियो । जेनतेन ५ वर्ष घिस्रिएको ट्रलिबसको सेवा सन् २००८ मा पुन रोकियो र सन् २००९ नोभेम्बर (विक्रम संवत् २०६६ ) बाट सदाका लागि बन्द भयो ।
बानेश्वरको यातायात व्यवस्था कार्यालय परिसरमा रहेको बा.अघ ३१ नम्बरको ट्रलिबसमा लेखिएको छ– म नै भविष्य हुँ । तर, अहिले यसको बाहिरी आवरण हेर्दा भने दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै छ । योसँगै रहेको अर्काे ट्रलिबसको नम्बर समेत देखिँदैन, जसमा लेखिएको छ– मलाई बचाइराख्नुहोस् । दुवै बसमा लेखिएका कुराले वर्तमानको समस्यालाई पहिल्यै नै भविष्यवाणी गरेजस्तो लाग्छ ।
एक जमाना विद्युतीय तारमार्फत काठमाडौंमा यी ट्रलिबस गुड्ने गर्थे, जसको अवशेष मेटिइसकेको छैन । केही बेवारिसे अवस्थामा छन् भने केहीलाई सशस्त्र प्रहरी बलको एक पोस्टले सुरक्षा दिइरहेको छ ।
कसरी बन्द भयो ट्रलिबस ?
‘नाफामा रहँदारहँदै घाटा देखाएर सुनियोजित तरिकाले बन्द गरिएको हो ट्रलिबस । तर, आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरिएको थियो, जसले ट्रलिबसलाई नाफामा जान भने बाधा पुर्याएको थियो,’ ०६६ मा ट्रलिबस व्यवस्थापकको रुपमा काम गरेका पुण्यप्रसाद भण्डारी बन्छन् ।
महानगरपालिकाले उनलाई ०६६ सालमा ट्रलिबसको व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो ।
०२९ सालमा तत्कालीन राजा वीरन्द्रले चीन सरकारसँग ट्रलिबसका लागि एक सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन राजा महन्द्रले चीन सरकारसँग यसबारे छलफल चलाएको भए पनि राजा वीरेन्द्रको पालामा मात्रै सम्झौता सम्पन्न भएको भण्डारी बताउँछन् । ट्रलिबसको निर्माण शुभारम्भ १४ पुस २०३० मा भएको थियो । सञ्चालनमा भने १४ पुस २०३२ देखि आएको थियो । सञ्चालनमा आएपछि तीन वर्षसम्म ट्रलिबसलाई चीनकै प्राविधिकले हेर्ने गरेका थिए । व्यवस्थापन तत्कालीन सरकारले गर्दै आएको थियो । चक्रपथ र सूर्य विनायकदेखि कलंकीसम्म विद्युतीय बससेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ आएको ट्रलिबस ०४६ पछि पार्टीहरूको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेको भण्डारी बताउँछन् ।
‘कर्मचारी अत्यधिक राखिएको थियो, यसले ट्रलिबसलाई हानि गर्यो,’ भण्डारी भन्छन् । भण्डारीले ट्रलिबस सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएपछि अध्ययन गरेर ‘नेपाली ट्रलिबस अब अस्तित्वको खोजीमा’ पुस्तक समेत प्रकाशन गरेका छन् ।
भण्डारीका अनुसार ०३५ सालमा ट्रलिबस सञ्चालन गर्ने जिम्मा तत्कालीन सरकारले संयुक्त नेपाल यातायात संस्थालाई दिएको थियो । ०३५ सालदेखि ०४५ सालसम्म ट्रलिबस नाफामा रहेको थियो । तर, राजपरिवार निकटका मानिसले सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको समयमा भने ट्रलिबसमा धेरै आर्थिक अपचलन हुने गरेको भण्डारी बताउँछन् । ०४५ सालमा एक सय ८० जना कर्मचारी रहेकामा ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै भने कर्मचारीको संख्या वृद्धि गरेर चारसय जना पुर्याइएको थियो । स्थापना कालमा ३२ वटा बससहित ट्रलिबस सेवा सञ्चालनमा आएको थियो । ०४६ सालपछि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले १० वटा ट्रलिबस थपेका थिए ।
आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरेका कारण ट्रलिबस घाटामा गएको भण्डारी बताउँछन् । घाटामा गएपछि ट्रलिबस सेवा ०५८ सालदेखि बन्द हुन पुग्यो । तर, ०६२ सालमा भने बन्द रहेको ट्रलिबस सेवा सञ्चालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले चासो देखाएका थिए ।
तत्कालीन सरकारले तीनवटै नगरपालिकामा सञ्चालन गर्ने गरी महानगरपालिकालाई भोगाधिकार दिएको महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रवक्ता बद्रीबहादुर खड्का बताउँछन् । खड्काका अनुसार महानगरपालिकाले बन्द रहेको ट्रलिबसलाई ०६२ सालदेखि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वरदेखि कोटेश्वरसम्मको सडकखण्डमा मात्रै ट्रलिबस सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
०६२ सालमा कोटेश्वरसम्म चल्ने गरेको भए पनि ०६६ सालमा मीनभवनसम्म मात्रै चल्ने गरेको थियो । ‘भक्तपुरसम्म चलाउने कुरा थियो । तर, ट्रलिबसको तार कोटेश्वर–भक्तपुर सडकखण्डमा बिग्रेका कारण सबै स्थानमा सञ्चालनमा आउन सकेन,’ खड्काले भने । ४२ गाडीमध्ये महानगरपालिकाले ०६२ सालमा जम्मा तीनवटालाई मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको थियो । महानगरपालिकाले जिम्मा लिएपछि पनि ट्रलिबसको आर्थिक स्थिति राम्रो हुन सकेन ।
ट्रलिबसका पूर्वव्यवस्थापक भण्डारी भने ट्रलिबसलाई सुनियोजित रुपमा घाटामा देखाइएको बताउँछन् । ‘ट्रलिबसले खपत गरेको विद्युत्को मात्रै पैसा तिर्छु भन्दा विद्युत् प्राधिकरणले मानेन । उल्टै मेरो हाकिम लगाएर थर्काउन लगायो मेरो मात्र एक्लो प्रयासले जीवित रहन सकेन ट्रलिबस,’ भण्डारीले भने, ‘मैले सञ्चालन गर्ने बेला पनि नाफामा थियो, तर मन्त्रालयदेखि महानगरपालिकाको मिलेमतोमा घाटामा देखाएर बन्द गरियो ।’
महानगरपालिकाका खड्का पनि ट्रलिबस बन्द हुनुमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नुलाई प्रमुख कारण ठान्छन् । काठमाडौंमा सफा टेम्पुको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नका लागि केही व्यक्तिको मिलेमतोमा ट्रलिबस बन्द गराइएको भण्डारीको दाबी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् वि.सं १९८४ सालमा नेपालमा रोपवे चल्थ्यो ! (भिडियो सहित)
अहिले बन्द भएको ट्रलिबसको नियमन कसले गर्ने भन्नेमा सरकारी निकायबीच नै अन्योल देखिन्छ । महानगरपालिका आफूले यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइसकेको हुँदा यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी महानगरपालिकाले गर्नुनपर्ने बताउँछ । ट्रलिबसको जग्गा र कार्यालयको भवनमा अहिले यातायात व्यवस्था विभाग रहेको छ । जग्गाको जिम्मा आफूले पाएको भए पनि ट्रलिबसको सुरक्षा तथा नियमनका विषयमा आफूहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरिएको यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक मुक्ति केसी बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा चीनको सहयोगमा ०३२ सालमा २२ वटा ट्रलिबस सञ्चालनमा थिए । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म १३ किलोमिटर रुटमा चलेका ट्रलिबस सरकारी बेवास्ताकै कारण बन्द भयो ।